Isikhungo Sokhiye BaseCalatafimi - I-Palermo
Kuvaliwe: NgoMgqibelo ntambama nangeSonto
Kusuka ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo ekuseni:
08:00-13:00 / 15:00-19:00
Ezokwakha kanye ne-Hydraulics
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-18)
Il Isikhungo Sokhiye BaseCalatafimi kaCorso Calatafimi 760 ePalermo is a okhiye bezikhungo nezikhiye ekhethekile ku ezokuphepha zokuhlala okukhona nezitolo.
ICalatafimi Keys Center - Ochwepheshe bezokuphepha
Iminyaka engaphezu kwe-10 Isikhungo Sokhiye BaseCalatafimi I-Corso Calatafimi 760 ePalermo ibhekisisa ukuphepha kwekhaya lakho nempahla yakho. At ukhiye nokhiye wesikhungo ePalermo ungacela ukuphindaphinda okhiye Kuzo zonke izinhlobo, i-codified ne-European, ukuphinda ukwebiwa kwemoto izilawuli kude nangamasango okuzenzakalelayo. Ngaphezu kwalokho, induku ye Isikhungo Sokhiye BaseCalatafimi iyatholakala ngokuthengiswa nokulungiswa kwe izingidi zazo zonke izinhlobo.
ICalatafimi Keys Center - Ukuphindwa kabili kukhiye ePalermo
Izinkomba ziyithuluzi lokufinyelela ekhaya lethu, ngakho-ke kuhlale kulindelekile ukuba nekhophi. Ngenxa yenkonzo ye ukuphindaphinda okhiye kuPalermo i-del Isikhungo Sokhiye BaseCalatafimi etholakala eCorso Calatafimi 760 (Palermo) ungacela okuzenzakalelayo kwesango elikude lokulawula okuphindwayo futhi i-alamu yemoto ngokushesha nangezindlela ezizuzisayo. The ukhiye nokhiye wesikhungo ePalermo iyinkampani ehamba phambili kulo mkhakha osekuyiminyaka engaphezu kweshumi isebenza ukuphepha kwamakhasimende ayo.
ICalatafimi Keys Center - Izilawuli kude zamasango ePalermo
Uma ufuna a ukhiye nokhiye wesikhungo ePalermo lapho ungacela khona Izilawuli kude zesango il Isikhungo Sokhiye BaseCalatafimi kweCorso Calatafimi 760 ePalermo ngokukhethekile ukuphindwa kwe Izilawuli zomsakazo futhi of imoto kanye nesithuthuthu transponder, okhiye abanamakhodi kanye nabaseYurophu bazo zonke izinhlobo zazo zonke izidingo. Abasebenzi besitolo bayatholakala ngezeluleko futhi nezinsizakalo zokusekela yanoma yiluphi uhlobo lokuhluleka noma ukungasebenzi kahle.
Isikhungo Sokubhekisisa Izindatshana zeCalatafimi - Izikhiye namawashi ePalermo
The bomsebenzi kanye nolwazi decennial we Isikhungo Sokhiye BaseCalatafimi ePalermo eCorso Calatafimi 760 bakwenze lokhu okhiye bezikhungo nezikhiye indawo ekhomba ukuphepha kwe izingidi nama-padlocks. Sibonga u ezokuphepha okunikelwe ngokuthengisa kwe anti-ukweba amaketanga, izimbotshana, uphephe, Izilinda zaseYurophu futhi izibambo, ungalala kahle futhi uqaphele ukuthi uphephe ngokuphelele.
Ikheli: UCorso Calatafimi, 760
I-POSTAL CODE: 90129
Umakhala ekhukhwini: 347 8172525
Facebook: Silandele kusuka lapha
Inombolo ye-VAT: 04949660825
Akukho okuphawuliwe okwamanje
Shiya imibono yakho
Kuthunyelwa ukuphawula njengesimenywa.
Izinamathiseli (0 / 3)
Yabelana ngendawo yakho